‘भ्रष्टाचार’ आरोपको थुप्रोमा उभिएकी माननीय जुली ! - Gokarna News from Nepal
‘भ्रष्टाचार’ आरोपको थुप्रोमा उभिएकी माननीय जुली !
शुक्रबार, फागुन ०९, २०७६ by गोकर्ण न्युज
काठमाडौं– जुली महतो । सुनिरहेको नाम हो । उनीसँग जोडिन्छन् नेपालमा विख्यात रहेका दुई नाम । पहिलो पति, दोस्रो दाजु । पति हुन्– निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ । दाजु– गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो ।
शक्ति केन्द्र, उनीप्रति लालयीत छ । कारण– अर्बौंको सम्पत्तीको मालिक हुनु । जुली, पति र दाजुको कर्मको नामसँग जोडिन्छिन् आर्थिक मामिलामा । पति विवादीत मन्त्री बने, दाजु विवादीत व्यापारी । शक्तिको आसपास, तलमाथि यीनैको हाली मुहाली छ । यसका पर्याप्त उदाहरण छन् ।
महिलाका नाममा दलगत हिसाबमा आउने अवसर होस्, मधेसीका नाममा आउने मौका होस् जुलीलाई मिलेको छ । उनको नाममा कुनै विवाद पनि हुँदैन । किनभने, उनीसँग छ अकुत सम्पत्ति । राजनीतिक दललाई चुट्कीका भरमा किन्न सक्ने अदभूत आर्थिक क्षमता छ । त्यसको प्रत्यक्ष स्रोत पति र दाजु हुन्, परोक्ष नेपाली जनताले तिरेको करमाथि रँजाई गर्न सक्ने राजनीतिक पहुँच ।
तर जब पूर्वमन्त्री महासेठको सम्पत्ति आर्जनको, भ्रष्टाचारको नाम आउँछ । जोडिन्छिन् जुली । प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा छिन् । नाताको साइनो मात्र होइन, भ्रष्टाचारको साइनो रहेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ । यो पनि हालसालैको प्रकरणलाई जोडेर ।
पूर्वमन्त्री महासेठले पदको दुरुपयोग गरी अनियमियता गरेको भन्दै आयोगमा परेको उजुरीमा मार्फत बनेकी छन्, जुली । महासेठबारे गुनासो आएको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्ने गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई पदच्युत गरेकै थिए ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागमा आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत अनियमितता गरेको भन्ने जुन प्रकारको गुनासो प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो, त्यहि विवरणको उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।
महासेठले पत्नी जुलीमार्फत विभागीय प्रमुख र अन्य कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा र जागिर खाइदिने डर धम्की देखाइ कानुन विपरीतका काम गर्न दबाब दिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठलाई हटाई केशव शर्मालाई महानिर्देशक बनाउन ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । बलराम मिश्रलाई रेल विभागको महानिर्देशक बनाउन पनि मन्त्रीले जुलीमार्फत दुई करोड असुल गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग खण्डको निजगढ–भरतपुर खण्डको पुनः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रक्रियाको फाइल रोकेर राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको ड्रिम प्राजेक्ट रहेको रेलको विषयलाई महासेठले रोकेपछि उनी पदच्युत हुनुपरेको थियो ।
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय, एडीबीको आयोजना निर्देशकमा पनि दिपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसको समन्वय जुलीले नै गरेको अभियोग लगाइएको छ । निजी स्वार्थ पूरा गर्न सरोज प्रधानलाईलाई उक्त पदबाट हटाइएको थियो ।
कर्मचारी बढुवमा पनि आर्थिक चलखेल व्यापक भएको आरोप लागेको छ । जसमा जुलीको समन्वय प्रमुख रहेको बताइन्छ । दिपक केसी, अशोक तिवारीलगायतलाई जनही ८० लाख रुपैयाँ लिई प्रथम श्रेणीमा बढुवाको सिफारिस भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
यीबाहेक विभिन्न ठाउँका सडक निर्माणमा पनि ठूलो चलखेल भएको र बिचौलियाले जुलीमार्फत मन्त्री महासेठसँग निर्णय गराएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो ।
लकडाउन चैत २५ सम्म कायम राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई प्रचण्डले लेखे पत्र : ‘कोरोना रोकथामको लागी नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्‍यो’
कोरोना उपचार तथा रोकथाममा उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको अपिल
प्रम ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषदको बैठक :लकडाउन अझै एक साता लम्ब्याउने तयारी
कोरोनासँगै लकडाउनको चपेटामा परेका गरिब र असहायको पक्षमा मुठी फुकाउन निजी क्षेत्रलाई प्रचण्डको आग्रह
करोनालाई लिएर विश्वका दुई शक्तीशाली नेता सी र ट्रम्पबीच टेलीफोन वार्ता,ट्रम्पले गरे चीनको प्रशंसा
सुडानमा नेपाली सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको मृत्यु
क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍न खोज्दा नदीमा हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास
स्पेनमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार नाध्यो,२४ घण्टामा ८१२ जनाको मृत्यु
बुटवल कारोना अस्पतालमा मृत्यु भएका युवकमा कारोना नभएको पुष्टि
विपन्नहरुलाई तत्काल खाद्य सामग्रीसहित राहत उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
कोरोनाको आशंकामा वीर अस्पतालमा भर्ना भएका दुईको मृत्यु,रिपोर्ट आउन बाँकी
यशुलाई विश्वास गरे कोरोनाले नछुने भन्दै भ्रम फैलाउने एक महिला चितवनबाट पक्राउ
स्वास्थ्य सामाग्री लिएर पुनः धनगढी र विराटनगर उडे सेनाको स्काई ट्रक
कोरोना आशंकामा पाटन अस्पतालको आइसीयूमा रहेका युवाको मृत्यु
ज्वरो आई सास फेर्न गाह्रो भएर अस्पताल पुर्‍याइएकी महिलाको मृत्यु
कोरोनाबाट प्रसिद्ध अमेरिकी गायक डिफीको मृत्यु
खुट्टामा घाउ लागेका बिरामीलाई ज्वरो आएपछि मेडिकल कलेजले उपचार नगरी फिर्ता पठाउँदा बिरामीको मृत्यु
कोरोनाबाट उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण अर्थमन्त्री थोमस स्याफरले गरे आत्महत्या
प्रदेश १ र ७ मा स्वास्थ्य उपकरण लिएर गएको सेनाको स्काई ट्रक बीच बाटोबाटै फर्कियो
लकडाउनले सुनसान काठमाडौं उपत्यका( तस्बिरमा हेर्नुहोस्)